P3.91 မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင်အသုံးပြုမှုစတိုးဆိုင်ဆိုင်ကိုပြတင်းပေါက်ကွက်ကုလားကာမျက်နှာပြင် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
Transparent LED video display ကတော့ showcase အမျိုးအစားတစ်ခုပါ, အရာရှေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပွင့်လင်းတဲ့ LED ရှိပါတယ်အစားဖန် en အတွင်းပိုင်းထုတ်ကုန်ပြ. ဒီပြပွဲဟာဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာနောက်ခံနဲ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားစွာပြသထားသည့်ထုတ်ကုန်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်သည်
P3.91 မြင့်မားသောတောက်ပမှုသည်ပွင့်လင်းမြင်သာသော ၀ င်းဒိုးဗီဒီယိုမျက်နှာပြင်ကို ဦး ဆောင်သည်
အလင်း, ပါးလွှာသော, ပွင့်လင်းမြင်သာသော, တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်, ထိရောက်သောနှင့်အရွယ်အစားကြီးမားသည့်ကြော်ငြာမီဒီယာကိုရရှိရန်။ ဖန်ကို ပိုမို၍ တန်ဖိုးရှိသောကြော်ငြာနေရာများဖွံ့ဖြိုးရန်ကြော်ငြာနံပါတ်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲခြင်း။ ဖန်သားပြင်ကိုကြော်ငြာများကိုဘ ၀ နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်နှင့်ကြော်ငြာအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပို၍ လက်တွေ့ကျစေရန်ပြုလုပ်သည်။, အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက် implant မှအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်.
1. ပေါ့ပါးသည်. သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်အတွက်အဆင်ပြေ & အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ချွေတာ, စီးဆင်းမှုပြပွဲများအတွက်သင့်လျော်သော.
3. မှန်ကန်စွာအဆစ်, ထည့်သွင်းခံရ & tool တစ်ခုမပါဘဲလူတစ် ဦး အားဖြင့် dismount လုပ်သည်.
4. ပြိုကွဲညွှန်ပြချက်အလင်းအိမ်နှင့်အတူ Human operating interface ကို, ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်.
5. မြင့်သော debugging တောက်ပမှုနှင့်မီးခိုးရောင်စကေးမပျက်စီးခြင်း, ရုပ်ပုံကောင်းအတွက် debugging နည်းပညာကိုရရှိသည်.
Pixel အသံ 3.91-7.81မီလီမီတာ 7.81-7.81မီလီမီတာ 10.42-10.42 မီလီမီတာ
LED အမျိုးအစား SMD1921 SMD1921 SMD2727
module အရွယ်အစား 500မီလီမီတာ * 125mm 500မီလီမီတာ * 125mm 500မီလီမီတာ * 125mm
Pixel သိပ်သည်းဆ 32768 pixels / m2 16384 pixels / m2 9216 pixels / m2
Refresh Rate 201920HZ
မီးခိုးရောင်အဆင့် 16 နည်းနည်း
တောက်ပ 0003000cd / m2 0002000cd / m2 0005000cd / m2
ယာဉ်မောင်းနည်းလမ်း 1/8 1/8 1/2
Angle ကြည့်ရှုခြင်း ဇ: 110° , V:110°
ကက်ဘိနက်ဆုံးဖြတ်ချက် 256*64 အစက် 128*64 အစက် 96*96 အစက်
ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား 1000mm*500 mm 1000mm*500 mm 1000mm*500 mm
Cabinet Weight7ကီလိုဂရမ်7ကီလိုဂရမ်7ကီလိုဂရမ်
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု 400ကက်ဘိနက် 300ကက်ဘိနက် 400ကက်ဘိနက်
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် LINSN & NOVASTAR
အပူချိန် - operating -20℃ ~ 60 ℃
စိုထိုင်းဆ - operating 10% ~ 90% RH
input ဗို့အား 110 ~ 220 VAC, 50~60HZ
Defect Rate .0000.0001
MTBF/Life span 35,000 Hrs/ 100,000 နာရီ